Usethole uthando olusha usaziwayo owahlukana nomrepha | News24
Usethole uthando olusha usaziwayo owahlukana nomrepha
Johannesburg – Sekuqubuke amahlebezi okuthi usaziwayo uBoity Thulo usethole isoka elisha elingumthwebuli u-Anele Papu, kubika iTimeslive.
Lokhu kuvela ngemuva kokuthi babonakale bengcebeleke bobabili emcimbini wokwethulwa kwe- Total French Street Festival ehhotela i-Fire and Ice eMelrose Arch.
Kunamahlebezi okuthi laba bobabili sebanesikhathi bethandana kanti kuthiwa ujabule uBoity.
Iphephabhuku i-Drum lithe umthombo walo ubatshele ukuthi u-Anele usehlala noBoity kanti bobabili bajabulile.
Ngesonto eledlule u-Anele ubhalele uBoity umlayezo wosuku lwakhe lokuzalwa ezinkundleni zokuxhumana ethi: “Ungumuntu umuhle kakhulu ngazo zonke izindlela engingazicabanga, ngiyakubona ngokuba ilo muntu onguyena.”